I-LinkedIn Campaign Manager ikhupha amava ayo amaNtsha okuNika iNgxelo | Martech Zone
NgoLwesine, Julayi 26, 2018 NgoMvulo, Julayi 23, 2018 Douglas Karr
I-LinkedIn yazisa ngamava okunikwa kwengxelo ngokutsha Umlawuli wePhulo le-LinkedIn, isenza ukuba kube lula ukuqonda ukuba aqhuba njani amaphulo akho. Ujongano olutsha luzisa amava acocekileyo kwaye enomdla ekuvumela ukuba ulawule ngokulula kwaye wandise imikhankaso yakho.
Uphuculo loMphathi wePhulo kwi-LinkedIn kubandakanya:
Gcina ixesha kwingxelo yephulo - Ngamava amatsha okunika ingxelo, ungabona ngokukhawuleza ukuba amaphulo akho aqhuba njani kwaye wenze uhlengahlengiso kubhabho ukuphucula iziphumo. Idatha kuMlawuli woMkhankaso ngoku ilayisha iipesenti ezingama-20 ngokukhawuleza, ikuvumela ukuba uskene idatha ngokufanelekileyo-nokuba unamakhulu emikhankaso kunye nobuchule bokwenza iintengiso. Kwakhona, isakhiwo esitsha se-nab sikuvumela ukuba utshintshe kwii-akhawunti uye kumaphulo kwiintengiso ngokucofa kabini. Siphinde sahlaziya ubuchule bokukhangela, ke kuthatha kuphela imizuzwana embalwa ukubuza imikhankaso ethile ngegama lomkhankaso, i-ID yomkhankaso, ifomathi yentengiso kunye nokunye.
Qonda ukusebenza kwephulo kunye nokwandisa ngokukhawuleza - Xa iintengiso zakho zingasebenzi kakuhle, kuya kufuneka uthathe amanyathelo ngokukhawuleza ukuze uchaneke. Kungenxa yoko le nto songeze amanqaku amatsha ukukunceda ukuba uthathe izigqibo zomkhankaso ngokukhawuleza kunangaphambili. Amava amatsha okunika ingxelo abonisa ukophuka okungama-1 ekunikeza ukuqonda okunzulu kwizalathi eziphambili ezinje ngemicimbi yokuguqula kunye nokubekwa kwiNethiwekhi yabaphulaphuli ye-LinkedIn.
Yenza amava akho okwenza ingxelo abe nguwe - Ngoku ungakhetha kwaye ukhethe imethrikhi yokujonga oyikhathaleleyo kakhulu, nokuba kukuSebenza, ukuGuqulwa okanye iVidiyo.
Ngokuka-LinkedIn, oku kukhutshwa linyathelo lokuqala kwisicwangciso semveliso yexesha elide.
Qalisa intengiso ye-LinkedIn
tags: Ukunxibelelana kwintengisoiintengiso ezihlanganisiweyointengiso ye-linkinUmlawuli wephulo lonxibelelaniso
Ungayilinganisa njani i-ROI yeePhulo zakho zeNtengiso yeVidiyo